E3 2013: Nintendo | Gadget သတင်း
အခြားနေ့ကတင်ပြသောအရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေသည် Nintendo Miyamoto နှင့် Reggie Fils-Aime တို့၏ဖော်ပြချက်နှင့် Doritos-Dew အငြင်းပွားမှုကြောင့်ကျော်ကြားသော Geoff Keighley နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Geoff သည်ရက်စက်စွာမေးခွန်းများနှင့်တင်ဆက်မှုနှင့်လက်ရှိအခြေအနေအပေါ်ဝေဖန်မှုဝေဖန်မှုများကိုမည်သို့ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ Wii U.
၏လက်တွေ့ကျကျ null ထောက်ခံမှု တတိယကြေငြာခဲ့သည့် Nintendo ၏ထူးခြားချက်၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအရောင်း (သို့) လများစွာစတင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသောကတ်တလောက်တစ်ကြောင်းသည်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောအကြောင်းအရာများသာဖြစ်ပြီး Reggie သည်သူတတ်နိုင်သလောက်ထွက်ပေါ်လာပြီး ad nauseam ကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ အဖြေများ ခုန်ပြီးနောက် Nintendo ဒီတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ခံစားမှု E3 2013.
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်နှင့်ဆိုနီတို့အနေဖြင့်ဤစည်းဝေးကြီး၌ Nintendo နှင့်၎င်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေချိန်တွင်ရိုးရှင်းစွာထားပါ တိုက်ရိုက် ၎င်းတို့သည်အလွန်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ခုတည်းသောဖိအားဖြင့်လာသည်၊ အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ရေရှည်တွင်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်နှင့်မဆိုကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ပုံမှန်ပုံမှန်စည်းချက်နဲ့အတူ \_ t Satoru Iwata သူကသတင်းကောင်းတစ်ခုတင်ပြခဲ့သည်။ ပြီးတော့မျက်တောင်အဖွင့်အရသင်ကြားပို့ချသမျှကိုလက်တွေ့တည်ရှိခြင်းဆိုတာကြိုတင်သိပြီး၊ မသိသေးသောအရာများသည်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကဇာတ်လမ်းတွဲနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသည်သမိုင်းတစ်လျှောက် Nintendo ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိခဲ့ပါက၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီတွင်စွမ်းအားကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းအောင်မြင်ခဲ့လျှင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆက်သွယ်ရန်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် Nintendo ရှာဖွေနေသည့် reception ည့်ခံမရှိလျှင်၎င်းကိုအချိန်အတန်ကြာဖွင့်ရန်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ကျန်ခဲ့သည် တစ် ဦး အသွင်အပြင်နှင့်အတူ။ အခုတော့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သလိုအခြားမပုံရသည်။
မာရီယို Kart 8 နှင့်အသစ် စူပါတပ်များ Bros သူတို့အမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်သူတို့သည်အတူတူပင်ပိုမိုတတ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်း Mario Kart တွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကတောင်းဆိုခဲ့သည့်အချို့သောအသစ်အဆန်းများပါဝင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Wii U catalog တွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Mario 3Dစူပါမာရီယို 3D Land ကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုများလာသည်။ တကယ်တော့၊ သင်က Land ကို World သို့ပြောင်းလိုက်ရုံပဲ။ ပထမဆုံးထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အရာက၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားတဲ့ Super Mario Galaxy မှာမြင်တွေ့ရတာနဲ့သိပ်ဝေးလွန်းပြီးလက်တွေ့တွင်ဘာမှမတီထွင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် Retro စတူဒီယိုစတူဒီယို၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Wii U တွင်ရှိခဲ့သောကြီးမားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည် မြည်းဟောင်ကောင် ဒီအရစ်ကျတွင်တွေ့မြင်ပြီးသောအယူအဆကိုဝေးဝေးမသွားပုံရသည့်နိုင်ငံပြန်လာခြင်း - ကင်မရာပြောင်းလဲခြင်း၊ Dixie Kong ပြန်လာခြင်းနှင့်အခြားအရာများ။ ကျနော့်အမြင်အရဒီ Saga ကြီးကိုကျွန်တော်မနှစ်သက်ပေမယ့် Metroid အသစ်ကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပလက်တီနမ်ဂိမ်းများ အသစ်တစ်ခုဂိမ်းကတည်းကဒီတင်ဆက်မှုအတွင်း၎င်း၏အလေးချိန်ရှိခဲ့ပါတယ် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ 101 နောက်ဆုံးတော့သင်ဟာပိုပြီးမြင်နိုင်ပါတယ် Bayonetta 2ပထမပိုင်းထက်ပို။ ပို။ hyperbolic ။ ဂျပန်စတူဒီယိုမှနာမည်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်သည်။
အတွက်နောက်တွဲယာဉ်အသစ် ပိုကီမွန် X / Y ကိုအောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယခင်တင်ပို့မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကြီးမားသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပြသသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အတွက် Nintendo Direct ရဲ့အကောင်းဆုံး၊ gameplay ပါတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခု Xအလွန်ကြီးမားသည့် Xenoblade Chronicles ကိုဆက်ခံသူသည် mecha သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Wii U catalog သည်ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အမြင့်ဆုံးအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမငြင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းခေါင်းစဉ်အများစုသည်သူတို့ထံမှလာသူများ၏လက်ထဲမှလာခြင်းသည်တရားမဝင်သောနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြစ်သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။ Zelda Wind Waker ကဲ့သို့ remakes, ယခင် Mario Super 3D XNUMXD လိုမျိုးသိုလှောင်မှုအသစ်များသို့မဟုတ် Donkey Kong ကဲ့သို့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်များသည်ပျင်းရိခြင်းကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ console အတွက်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ခေါင်းကိုမြှောက်လော့။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - MVJ မှ Nintendo
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » Nintendo ကအတူတူပါပဲ
Sony သည် PlayStation4ဖြင့်လူသိများသည်